Ubhontshisi omhlophe kanye nobhontshisi obanzi katamatisi | Bezzia
Ubhontshisi omhlophe nesitshulu sebhontshisi esibanzi notamatisi
UMaria vazquez | 06/06/2021 10:00 | I-Legumes
Sisebenzise ngokunenzuzo ukupholisa enyakatho ukulungiselela ifayili le- isitshulu esiduduzayo kakhulu, isitshulu samabhontshisi amhlophe nobhontshisi obanzi notamatisi. Yize isikhathi sikabhontshisi sesiphelile, sisenazo ezinye ezigciniwe futhi asifunanga ukuzimosha.
Lesi sitishi silula, naphezu kohlu olude lwezithako. Futhi ngukuthi sifake kuyo a ukuthinta okungajwayelekile ngezinongo ezahlukahlukene nengxenye yobisi lukakhukhunathi. Uma ungalokothi ufune lezi zithako noma ungenazo, ungafaka izinongo kwabanye ngokuthanda kwakho nobisi lukakhukhunathi ngenani elifanayo lomhluzi.
Izikhala zingenziwa eziningi yize, ngokusobala, uma seziqediwe, umphumela uzoba nokuncane noma ungahlangene nakancane nalokho esikutholile. Noma kunjalo, lizohlala liyi- isidlo esifanele ukuqedela imenyu yakho yamasonto onke. Ingabe unesibindi sokuzama?
Utamatisi ovuthiwe oyi-3, ehlutshiwe waqunywa
1/2 isipuni se-turmeric
1/2 isipuni ikhumini
1/2 isipuni ujinja
1 ithisipuni yeGaram Masala
1 ubhontshisi obanzi obubanzi
2 izingilazi zamanzi noma umhluzi wemifino
1 ingilazi yobisi lukakhukhunathi
Ibhodwe elilodwa lobhontshisi omhlophe ophekiwe
Faka izipuni ezimbili zamafutha epanini bese susa u-anyanisi emlilweni ophakathi negalikhi imizuzu eyi-10.
Ngemuva engeza utamatisi bese upheka uze uqale ukuwohloka. Ungayisiza ngokunyakazisa nokuxubha utamatisi.
Uma utamatisi usuthambile, engeza izinongo, ubhontshisi namanzi, hlanganisa bese upheka eminye imizuzu engu-5 ngaphezulu komlilo ophakathi nendawo ne-pan emboziwe.
Okulandelayo, hlanza ubhontshisi ngaphansi kwamanzi abandayo bese uwafaka ku-casserole. kanye nobisi lukakhukhunathi. Hlanganisa bese upheka eminye imizuzu emihlanu ukuze ama-flavour ahlangane.
Khonza ubhontshisi omhlophe nesitshulu sebhontshisi esibanzi ngotamatisi, kushisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ungadliwa » I-Legumes » Ubhontshisi omhlophe nesitshulu sebhontshisi esibanzi notamatisi
Wenza kanjani amehlo amancane